I-China WIK 6800 Self Loading Concrete Mixers Umkhiqizi nomhlinzeki | UWilk
WIK Ama-Mixers Wekhonkrithi Wokuzimela we-6800
Imodeli. I-WIK6800 (Vumelanisa). Oluvala amasondo 10T isondo onqenqemeni deceleration kabili ukubopha ibhuloho
Imodeli yenjini Yuchai Power 4108 Ukulekelela ITire. 1670R22.5 Ucingo high-ingcindezi irowu kabili
Kukalwe amandla 91kw Isithuthuthu. Imoto ye-Oko axial plunger
Ifomu leDrayivu Liquid torque converter (isigaba variable speed).) Indlela amanzi ahlinzekwa ngayo Umfutholuketshezi yangaphandle / / edluliselwe isikhathi
Ibhokisi legiya. Ukudluliswa kokushintshwa kwe-ZL-280 Ifomu factor 7600 x 2950 x 3400mm
Igiya 4 ngo-4 emuva ngejubane eliphindwe kabili neliphansi Ikhwalithi yokulungiselela 9000kg
I-WIK Self Loading Concrete Mixers inamalungelo obunikazi ayisisekelo okwenza ubuchwepheshe bokukhiqiza ngokhonkolo. Kusukela lapho, akusekho nzima ukukhiqiza nokuhambisa ukhonkolo. Abantu ababili bangafinyelela ekuphumeni kwamamitha ama-cubic 140 ngosuku.
I-WIK Self Loading Concrete Mixers iloli lokuxuba elizenzekelayo ngokugcwele njengamanje iloli lokuxuba eliphambili kakhulu. Kudinga abasebenzi ababili kuphela ukusebenzisa imoto, omunye ubhekene nokushayela imoto kanti omunye unesibopho sokondla usizo. Injini yayo ingasetshenziswa kumasayithi amaningi Ekusebenzeni okujwayelekile, ithangi lokuxuba lingazungeziswa ama-degree angama-270 ngokuvundlile futhi lingakhishwa kunoma yisiphi isikhundla somzimba wemoto. Ingabe kusindisa kakhulu abasebenzi futhi kulula ukukhiqiza ukhonkolo?
Into ebaluleke kakhulu ekwakhiweni kwezakhiwo ezisezingeni eliphakeme ukhonkolo. I-artifact engifuna ukwethula kuwe namhlanje yiloli lokuxuba ukhonkolo. Ihlanganisa imisebenzi eminingi futhi ingashintsha amasethi e-generator, ama-loaders, ama-mixers, amathangi, nabasebenzi abangaphezu kwabayi-6. Umzimba uza nezikali ezinembile ze-elekthronikhi, izinhlelo zokujova amanzi namathangi wamanzi amakhulu. Le moto ingakhiqiza kuze kufike ku-200 ngosuku. Ukhonkolo Cubic
Iloli lakamuva lokuxuba ukhonkolo wasekhaya elinomqondo omusha wokuklama. Ingakhiqiza ukhonkolo wama-cubic metres ayi-20 ngehora elilodwa. Ukuba nomxube kakhonkolo kufana nokuba nomlayishi, isixubi, ne-conveyor engakwazi ukulayisha, ixube, futhi ithule ngokuzenzakalela. Abasebenzi ababili bangasebenzisa isikali esinembile se-elektroniki ukulungiselela izinto zikakhonkolo. Uma kuqhathaniswa nekhwalithi yenombolo, ithangi lamanzi elinamandla amakhulu liqinisekisa ukugcwaliswa kwamanzi okuzenzakalelayo. Imali engenayo ngehora ifinyelela ezinkulungwaneni zama-yuan, futhi ipuleti lelayisense lingasetshenziswa ukushayela ngokujwayelekile.
Umshini omusha wokuxuba ukhonkolo ungakhiqiza ukhonkolo ngamamitha ayi-cubic 4 ngemizuzu eyi-12. Ukuba neloli lokuxuba ukhonkolo kufana nokuba nomthwalo wokulayisha, umxube, iloli lezokuthutha kanye nabasebenzi abangaphezu kweshumi nambili. Ingazilayisha, ihlanganise, futhi ithule ngokuzenzakalela. . Izikali eziqondile zikagesi zilawula ikhwalithi yezinto zokusetshenziswa zikakhonkolo. Uhlelo oluzenzakalelayo lokujova amanzi nethangi lamanzi elinamandla amakhulu lakha izimo ezilula zokuxuba ukhonkolo.
Imishini yakamuva ye-Concrete Mixing ivula inkathi entsha yokukhiqizwa kokhonkolo. Ukudla okuzenzakalelayo, ukugcwaliswa kwamanzi okuzenzakalelayo, ukuxubana okuzenzakalelayo nokulayishwa okuzenzakalelayo kungathuthukisa isimo sothuli esakhiweni. Idizayini yohlelo lomuntu, elula futhi elula yokusebenza kohlelo, isikali esinembile se-elekthronikhi kanye nethangi lamanzi amakhulu, Kuyisiqinisekiso esihle sokuxubana kokhonkolo. Ingakhiqiza ukhonkolo wama-cubic metres ayi-20 ngehora elilodwa, okonga imali, okusebenzayo futhi okulula.
Langaphambilini I-WIK 5500 Self Loading Mixers Yokhonkolo
Olandelayo: WIK28F Isondo elilayishayo
I-3.5 TON 4 × 4 Ijika eline Forklift
4 ton yonke-in-one 4X4 forklift